PSG Oo Shaacisay Muddada Uu Garoomada Ka Maqnaan Doono Mid Ka Mid Ah Xiddigaheeda Ugu Muhiimsan Oo Dhaawacmay - Gool24.Net
PSG Oo Shaacisay Muddada Uu Garoomada Ka Maqnaan Doono Mid Ka Mid Ah Xiddigaheeda Ugu Muhiimsan Oo Dhaawacmay
Kooxda kubadda cagta PSG ayaa heshay warbixinta dhakhaatiirta ee sida uu yahay xaalka dhaawac soo gaadhay mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan ee tiirka u ah guulaha ay xili ciyaareedyadii ugu dambeeyey ka gaadhaysay tartamada gudaha Faransiiska iyo bandhigyadii ay ka samaynaysay qaaradda Yurub.
Ciyaartii Arbacadii PSG ay 3-0 ku garaacday Reims ee ay ugu gudubtay finalka tartanka Coupe de la Ligue, waxa daqiiqaddii 20aad garoonka laga saaray difaaca reer Brazil ee Marquinhos oo dhaliyey goolka koowaad, kaddib markii uu soo gaadhay dhaawac muqura ah oo uu muddo ku maqnaan doono.
Warbixin ay soo saartay PSG ayaa waxay ku sheegtay in muddo saddex toddobaad ah uu garoomada ka maqnaan doono Marquinho, waqtigaas oo ay kooxa kusoo fool leeyihiin ciyaaro adag oo horyaalka ah.
“Marquinhos waxa gaadhay dhaawac muruqa ah Arbacadii kulankii garoonka Stade Auguste Delaune, baadhitaan lagu sameeyeyna waxay xaqiijiyeen in muruqa dambe uu waxyeello ka qabo. Waxa la filayaa inuu muddo saddex toddobaad ah maqnaan doono.” Ayey PSG ku tidhi warbixinteeda.
Kooxda haysata horyaalka Ligue 1, ayaa haddaba la ogyahay in uu Marquinhos ka maqnaan doono ciyaaraha ay la dheeli doonaan Lille, Montrpellier, Nantes iyo Lyon iyo waliba ciyaarta usbuuca dambe ee Coup de France oo ay ku ballansan yihiin kooxda heerka saddexaad ee Pau.
Laakiin, waxa PSG ay rajaynaysaa inuu usoo laabto ka hor ciyaarta Champions League ee Borussia Dortmund oo February 18 ay lugtiisa hore ku ciyaari doonaan waddanka Germany.